मनिषा कोइरालाका पक्षमा कुन कलाकारले के बोले ? – Makalukhabar.com
दिगो पर्यटन मार्फत चितवनको विकास विषयमा छलफल
मनिषा कोइरालाका पक्षमा कुन कलाकारले के बोले ?
मकालु खबर	 २०७७ जेष्ठ ८ गते प्रकाशित 114 0
काठमाडौं । मनिषा कोइरालाले मातृभूमीको पक्षमा दिएको अभिब्यक्तिप्रति भारतीय मिडियाले खेदो खनेपछि नेपाली कलाकारहरु पनि नायिका मनिषा कोइरालाको पक्षमा उत्रिएका छन् ।
दुई दिन अघि मनिषाले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको ट्वीटलाई रिट्वीट गर्दै नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी लिपुलेक भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेकोमा स्वागत गरेकी थिइन् । सोको विरोधमा भारतीय मिडियाहरुले मनिषा कोइरालालाई तल्लो स्तरको गाली गरेपछि नेपाली कलाकारहरुले मनिषाले राष्ट्रियताका पक्षमा बोलेको बताएका छन् ।
कलाकार तथा निर्माता दीपकराज गिरीले भारतीय मिडियाको प्रोपोगाण्डा हास्यास्पद भएको बताएका छन् । उनले मनिषाको राष्ट्रप्रेम स्वभाविक र सहि समयमा भएको बताएका छन् । ‘मनिषा कोइराला पहिलो नेपाली कलाकार हुन् । जसले त्यो स्थानमा पुगेर गर्वसाथ आफूलाई नेपाली भनेरै चिनाइन् । उनकै हाराहारीमा चर्चा पाएका केही कलाकार आफूलाई नेपाली भन्न रुचाउँदैनन् । तर, मनिषालाई भारतमा पनि नेपाली सुन्दरी भन्ने गरिन्थ्यो । उनी नेपाली छोरी भएकाले नेपालको पक्षमा बोल्नु कुनै अनौठो कुरा होइन ।’ गिरीले भनेका छन् ।
नायिका पूजा शर्माले पनि मनिषा कोइरालाको समर्थनमा लेखेकी छिन् । नायिका शर्माले लेखेकी छिन्–‘आफ्नो व्यक्तित्व र अभिनयका कारण विश्वकै मन जित्न सफल नायिका मनिषा कोइरालाले नेपाली भूमिको बिषयमा टिप्पणी गर्दा भारतीय मिडिया रोइलो गरिरहेका छन् । तर, उनीहरुले सत्यता के हो भनेर केलाएर समाचार बनाउने र खोजी गर्ने चेष्टा गरेनन्, यो दुखको कुरा हो ।
पूजाले अगाडी लेखेकी छिन् ‘मनीषा दिदीले भारतको नुन भिख मागेर खानुभयको हैन आफ्नो कलाकारितामा उभियर खानुभयको हो । मनीषा दिदीको योगदानलाई लत्याउदै उल्टै अपशब्द बोल्ने मिडीया प्रति टीठ लागेर आयो! नेपालीहरु काम र कर्मको सिलसिलामा सन्सारभर होलान तर जब देश र आफ्नो जमीनको कुरा हुन्छ तेतीबेला देशकै पक्षमा बोलीन्छ जन्मदिने आमालाई पराई ठानेर आफ्नै आमाको अङ्ग लुच्छने पराईलाई आमा भन्न सकिदैन चेतना भया! अर्को दुःख यसमा लागेको छकी भारतीय मिडीयाले नेपाल र मनीषा दिदीको बारेमा ठुलो ठुलो स्वरमा नानाभती भनीरहदा नेपालका मिडीयाहरुले खासै आवाज उठाउन सकेनन्’
गायिका इन्दीरा जोशीले पनि मनिषालाई समर्थन गरेकी छिन् । गायिका इन्दिरा जोशी लेख्छिन्–‘आफ्नो अद्भुत अभिनय क्षमताका कारण उनले बलिउडमा थुप्रै योगदान दिएकी छिन् । कैयौ हिट चलचित्र दिएकी छिन् । कर पनि तिरेकी छिन् । यो व्यक्तिगत कुरा होइन, सेवाको आदान–प्रदानको कुरा हो । क्यान्सरसँग लडेकी एक बहादुर महिला धेरैका लागि उदाहरण हुन् । सत्यको पक्षमा उनी उभिएकी छिन् ।’ उनले अङ्ग्रेजीमा लेखेकी छिन् ।
मकालु खबर 901 खबरहरु0टिप्पणीहरू
लिपुलेकबारे मनिषाको रिट्वीटमा सुषमा स्वराजका श्रीमानको आयो यस्तो जवाफ
मनिषाकाे समर्थन गर्दै भारतीय मिडियालाई विप्लव समूहले दियाे यस्ताे चेतावनी
जापानमै बनेकाे सुजुकीकाे पहिलाे कुन कार नेपालमा आउँदैछ ?